यमनमा १२ वर्षीय युवकको बलात्कारपछि हत्या गर्ने अपराधीलाई सार्वजानिक रुपमा गोली हानि मारियो, नेपालमा ? – Himalitimes
यमनमा १२ वर्षीय युवकको बलात्कारपछि हत्या गर्ने अपराधीलाई सार्वजानिक रुपमा गोली हानि मारियो, नेपालमा ?
यमनमा एक १२ वर्षीय युवकको अपहरण र बलात्कारपछि हत्या गर्ने दुईजना अपराधीलाई सार्वजानिक रुपमा गोली हानि मृत्यु दण्डको सजाय दिइएको छ । बिहिबार् २८ वर्षीय वदा रेफात र ३१ वर्षीय मोहोम्मद खेलेदलाई एडेन शहरस्थित सयौँ मानिसका अगाडि गोली हानि मारिएको हो ।
समाचारमा जनाइए अनुसार् गत मे महिनामा मोहोम्मद साद नामक १२ वर्षे युवक अपराधी खलेद र रेफतको घर नजिकै खेलिरहेका बेला उनीहरुले ति १२ वर्षीय युवक घरभित्र लगेर शोषण गरेका थिए । ‘त्यसरी बलात्कारपछि मद्दतका लागि चिच्याइरहेको बालकलाई शान्त पार्न नसक्दा उनीहरु मध्ये एकजनाले चक्कुले बालकको घाँटी काटिदिएको अदालतको कागजादमा उल्लेख गरिएको छ ।
यमनमा विश्वकै सबैभन्दा उच्च मृत्युदण्ड दर रहेको छ जसमा गोली हान्नुलाई सबैभन्दा सामान्य तरिका मानिन्छ । यो देशमा इस्लामिक शारिया कानुन लागु हुने गरेकाले नै हत्या, बलात्कार अनि आतङ्कवाद लगायतका अपराधीहरुलाई मृत्युदण्ड दिइने गरिएको छ । यसरी अपराधीहरुलाई सार्वजानिक रुपमा सजाय दिएको हेर्न सयौँ मानिस भेला हुने गर्दछन् ।
प्रकाशित मितिः सोमवार, माघ २८, २०७५ 3:43:52 AM |
Prevयुएईमा हिन्दीले पायो अदालतमा प्रयोग् गरिने तेस्रो आधिकारिक भाषाको मान्यता,नेपलीलाइ पनि सहज
Nextपैसाको लोभले गौशालामा मरेका गाईको संख्या बढाईचढाई सार्वजनिक गरेको खुलासा